साथीहरु सोध्छन्"खै! नयाँ केही"
जवाफमा एक जोर ओठहरु तन्काउछु ।
प्रश्नहरुको ओइरो खेप्न नसक्दा,
फुत्त शब्द निस्कनछ ,
"कस्तो नि!"-ठिमाहाहरुको प्रश्न ।
कस्तो-कस्तो मलाई नै थाहा भएन ।
बैंशमा रहरहरुको अवसान
आवश्यकताहरुको लर्कोमा प्रेमको अवसान
प्रेममा आत्मियताको अवसान ।
खुशीहरुमा बैंशको अवसान
इच्छाहरुमा जाँगरको अवसान
नौलोको अवसान गरिएछ ।
गर्ने क्रम जारी छ
केही न केही ,कतै न कतै
लत नै बसेछ क्यार्!
त्यसै-त्यसै विना कारण
गर्ने चस्का पसेको छ म भित्र .........